Chelsea oo qorsheyneysa inay dalab rikoor ah ka gudbiso Haaland
Home Horyaalka Germalka Chelsea oo qorsheyneysa inay dalab rikoor ah ka gudbiso Haaland
Blues ayaa diirada saareysa weeraryahan heer sare ah oo reer Norway ah
Chelsea ayaa qorsheyneysa inay dalab rikoor ah ka gudbiso weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Haaland – sida laga soo xigtay The Athletic .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Norway ayaa qandaraaskiisa haatan lagu burburin karaa million 75 million (£ 67m / $ 91m), laakiin ma noqoneyso mid firfircoon illaa iyo 2022, taasoo la micno ah in BVB ay u badan tahay inay dalbadaan lacag aad u badan oo hanti qaali ah ka hor inta uusan ku amrin bixitaankiisa sanadka.
Si kastaba ha noqotee, Chelsea ayaa u aqoonsatay Haaland inuu yahay bartilmaameedka koowaad iyadoo Frank Lampard uu doonayo inuu ku daro weeraryahan sarre oo ka mid ah safkiisa si kor loogu qaado fursadaha kooxdiisa ee ku tartameysa hanashada Premier League iyo Champions League .
xidigan ayaa hada ah mid kamid ah dhalinyarada ugu rajada wanaagsan kubada cagta aduunka, Chelsea ayaana wajaheysa loolan adag oo ku aadan saxiixa weeraryahanka, iyadoo kooxaha sida Barcelona, ​​Juventus iyo Man City ay yihiin koox Erling xiriir shaqsiyadeed la leh.
Previous articleTabaraha Juventus Andrea Pirlo oo bahdilay Xidigaha Kooxdiisa kadib guuldarii Inter Milan
Next articleLiverpool ayaa dib u soo dhaweyn doonta Ben Woodburn ka dib amaahdii Blackpool